Real Madrid oo u Soo Baxday Finalka Koobka Naadiyada Aduunka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Real ayaa u soo baxday Finalka koobka naadiyada aduunka ee Fifa Club World Cup,ka dib markii ay garoonka Le Grand Stade de Marrakech ee dalka Morocco ay 4-0 uga badisay kooxda Cruz Azul ee dalka Mexico.
Kooxda Real Madrid ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Sergio Ramos.
Ciyaaryahan Karim Benzema ayaa daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Real Madrid,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii koowaad ee ciyaarta.
Gool hayaha kooxda Real Madrid Iker Casillas ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta rigoore ka badbaadiyay ciyaaryahan Gerardo Torrado.
Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Isco ayaa daqiiqadii 71-aad ee ciyaarta goolka afaraad u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaamiyo macalin Carlo Ancelotti ayaa badisay kulankii 21-aad oo xiriir ah dhamaan tartamada ay ka qeyb galeyso.
Kooxda Real Madrid ayaa Finalka koobka naadiyada aduunka sabtida la ciyaari doonto kooxdii soo baxdo kooxaha San Lorenzo iyo Auckland City oo habiin danbe wada ciyaari doono.